Archive du 20200429
Farihin'Andraikiba Nahitana fatina tovovavy nitsingevana
Vehivavy iray manodidina ny 18 taona ka hatramin’ny 20 taona eo ho eo no hita faty natsingevan’ny rano tao amin'ny farihin'Andraikiba,
Fokontany Misavoritaka tanteraka
Ao anatin'ny fihibohafana tanteraka ny Malagasy izao, indrindra eto Analamanga.
Fanapariahana vola sandoka Roalahy tratra tany Mananjary
Lehilahy miisa roa no voasambotry ny polisy ao Mananjary ny zoma 24 aprily lasa teo noho ny fanapariahana vola sandoka.
Andron’ny fahalalahan’ny fanaovan-gazety Hifantoka amin’ny tsy fanahiana sy tsy firaisana tsikombakomba
Hifantoka amin’ny tsy fanahiana sy tsy firaisana tsikombakomba amin’ireo heverina ho fahavalom-piarahahamonina ny lohahevitra mandritry ny
Efa tena kenda tanteraka
Inona moa izany no maha samy hafa ny miasa hatramin’ny 1 ora tolakandro sy ny miasa hatramin’ny 6 ora hariva?
Sazalahy Tsianihy Mitaky ny hanokafana ny zotra nasionaly
Mitaky marin-drano ny hanokafana amin’izay ny zotra nasionalin’ny fiara fitateran’olona miakatra aty Antananarivo izahay,
Fitohanan'ny fiarakodia Miverina tanteraka
Efa nanomboka amin ny 5ora maraina no mahazo mandeha ny fiara ary mijanona amin ny 3ora tolakandro,indrindra ho an ireo taxibe.
Laza adina andrana ho an’ny kilasy faha-9 Efa azo jifaina ao amin’ny ketrika.com
Vao tsy ela izay no namoaka ny boky nomerika hoa an’ireo mpanala fanadinana CEPE ny ketrika.com .
Mpianatra manala CEPE Tsy terena hisotro Covid Organics
Tsy nomen’ny fanjakana ilay tambavy CVO na Covid oragnics ireo mpianatra ao amin’ny taona fahadimy rehetra niditra an-dakilasy nanomboka afak'omaly alatsinainy.
Vondron'ny Sekoly tsy miankina "Tsara kokoa raha ahemotra ny datim-panadinana"
Niato nandritra ny iray volana ny fampianarana teto amintsika noho ny fametrahana ny fahamehana ara-pahasalamana.
Pr Rafatro Herintsoa “Nanavotra ny Malagasy ny fitsaboana nolovaina.”
Nanazava ny fahitany ny antony tsy handairan’ny viriosy COVID 19 loatra eto amintsika tetsy amin’ny ivon-toeram-pibaikoana momba izany etsy Ivato omaly ny Pr Rafatro Herintsoa,
Zavamaniry avadika ho fanafody Miaraka miasa ny HAFARI sy ny ASTRAM
Miezaka manandratra hatrany ny vita Malagasy ny fikambanana Hafari Malagasy, tarihin-dRafanomezantsoa Jean Nirina.
CHU Anosiala Notoloran’ny Pr Blanche Nirina fampitaovana
Tonga nizara ny fahaiza-manao momba ny “5S-Standar de service” amin’ny fiatrehana ny coronavirus teny amin’ny CHU Anosiala ny ny Profesora Blanche Nirina Richard mivady omaly.
Mampiaka-peo ny SSM "Avelao hiasa feno amin’izay ny mpiasa"
Miantraika mafy amin’ny mpiasa Malagasy ny tsy fisian’ny asa, hoy ny Firaisan-kinan’ny Mpiasa Malagasy na ny Randram-bao sendikaly fantatra amin’ny hoe SSM.
Norobaina ny vola 124 tapitrisa ariary Novonoina sy nalevina teo an-tokontany ilay Sinoa
Nanomboka ny 14 martsa hifoha ny 15 martsa no tsy hita sy tsy azo tamin’ny antso an-tariby ny mpandraharaha sinoa iray mpivarotra “balle friperie” monina ao Ambohijafy Toamasina
Andohatapenaka Voasambotra ilay mpangalatra gisa sy ny mpividy azy
Naharay fitoriana ny polisy avy ao amin'ny boriborintany fahafito etsy amin’ny 67ha
Antananarivo Zokiolona sy zaza sahirana 1600 nomena arotava
Tafakatra 1600 ireo arotava nozaraina ho an'ireo zokiolona sy ireo zaza sahirana sy marefo teto Antananarivo manokana ny 27 aprily lasa teo.
Vidin-tsolika Mila fehezin` ny fanjakana
Mitotongana ny vidin-tsolika maneran-tany ami`n izao fotoana izao ka tafidina hatrany amin'ny 12 dolara ny barila eo amin`ny tsenam-pirenena.
Andravoahangy, Anosibe, Analakely Maro no manana arotava saingy tsy manao
Mbola misy ihany ireo olona tsy manao aron-tava amin’izao mivoaka ny trano na dia manao toto afo aza ny fanentanana.
Arotava Mila soloina isaky ny adin'ny efatra
Manoloana ny aretina COVID-19, ny fanaoavana arotava no fepetra voalohany napetraky ny fitondram-panjkana.
Fihibohana Misy akony ratsy any amin'ny asa fivelomana
Iray volana sy tapany latsaka izao no niainantsika teto Madagasikara ny famehana ara-pahasalamana izay niteraka ny fihibohana ka tsy nahafahana nanao na inona na inona.
Kaominin’Antananarivo renivohitra Tsy mbola nisy komity Loharano nitsangana
Naka sy nanangona ireo olona tsy manan-kialofana rehetra ny kaominin’Antananarivo renivohitra raha vao nilaza ny filoham-pirenena fa miditra anaty fihibohana isika,
Ahiana ho nifindran’ny Covid-19 Olona 4 karohina fatratra
Misy ny fampiantsoana ireo olona 11 tsy tratra antso noho izy ireo niray fiara tamina olona voatily taty aoriana.
Itasy, Vakinankaratra, Ihorombe, Sofia,… Nahazo fampitaovana ny mpiasan’ny fahasalamana
Anisan'ireo faritra nisitraka ireo fampitaovana ny mpiasan'ny fahasalamana hoentina miatrika sy misoroka ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus ihany koa.
Tambavy CVO Liana koa i CamerounTambavy CVO
Nanambara ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka any Cameroun, Manaouda Malachie,